Development Network for Immigrants ─ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူပျိုးထောင်ရန်သင်တန်း အကျဉ်းချုပ်
နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူပျိုးထောင်ရန်သင်တန်း အကျဉ်းချုပ်
Data sourceMinistry of Economic Affairs
Updated : 2017/12/6 上午 11:46:00
စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဗျူရိုမှ လုပ်ငန်းရှင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်ရန် လုပ်ငန်းရှင်ကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူလိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေစုစည်း(ဆောင်း)အကဲဖြတ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်(တိုင်ပေ)အခြေစိုက် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ(TAITRA) အား “နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူပျိုးထောင်ရန်သင်တန်း” ဆောင်ရွက်ရန်အပ်နှံထားသည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားမည့်အကြောင်းအရာ ရှင်းလင်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း :
၁. နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး ၂နှစ်တာသင်တန်းတွင် ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားစကား တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံးအင်္ဂလိပ်စာ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပြီး ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဘာသာစကားသွားရောက်လေ့ကျင့်ရန် ၁၀လခရီးစေလွှတ်မည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် လုပ်ငန်းရှင်နှင့်အရည်အချင်းရှိသူကိုချိတ်ဆက်စီစဉ်ပေးမည်။
၂. နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး ၁နှစ်တာသင်တန်းတွင် ဗီယက်နမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားစကား အလယ်အလတ်အထက်အရည်အချင်းရှိသော နိုင်ငံသားအား သင်တန်းတက်ရန်လက်ခံသည်။ ပြည်တွင်း၌ လုပ်ငန်းခွင်သုံးအင်္ဂလိပ်စာ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယရေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အရည်အချင်းရှိသူကိုချိတ်ဆက်စီစဉ်ပေးမည်။
၃. အထက်ပါသန်တန်းသားများ သန်တန်းပြီးဆုံးလျှင် အလုပ်ခွင်ဝင်ရန်စီစဉ်ပေးမည်။ သင်တန်းသားများ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းလော့ဂ်အင်ပြီး ကုမ္မဏီများနှင့်အွန်လိုင်းချိတ်ဆက်လို့ရသည်။
ဤစီမံကိန်းမှတဆင့် ကုမ္မဏီများ အရှေ့တောင်အာရှစျေးကွက်တွင် ရောင်းအားချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးရန် လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သော စွမ်းရည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ပျိုးထောင်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်အသုံးချနိုင်ရန်မျှော်လင့်သည်။